Ndifuna Ukhululeka nguKumkanikazi - Izinto Zobugcisa
Ndifuna Ukhululeka nguKumkanikazi
I-Queen bass player uJohn Deacon wabhala oku ngokwembono yamadoda yombutho wenkululeko yabasetyhini.
Le ngoma yaba ngumhobe we-ANC eMzantsi Afrika ngasekupheleni kweminyaka yama-80s xa uNelson Mandela wayesesentolongweni kwaye imigaqo-nkqubo yocalucalulo karhulumente yayisekhona.
Ividiyo yale ngoma idlala isepha eyaziwayo yaseBritane, Isitalato iCoronation . Ulandelelwano lokuvula lubonisa onke amalungu ebhendi ekurhuqeni (iMercury njengomfazi wasekhaya, uDikoni njengomakhulu, uTaylor njengentombazana yesikolo, kunye noMeyi njengomfazi wasekhaya). Oku kudidekile abantu abaninzi abangakhange babambe ireferensi. UBrian May wabuzwa kudliwanondlebe naye Q imagazini kaMatshi 2011 nokuba ilungu lelungu ngalinye levidiyo kwividiyo yayiyimbonakalo echanekileyo yobuntu babo? Waphendula wathi: 'Ewe kunjalo! Wonke umntu ucinga ukuba yayiyimbono kaFreddie leyo ngoba ijongeka ngathi yinto angathanda ukuyenza kodwa yavela kwintombi kaRoger ngelo xesha, ngendlela eyothusayo. Yayingumbono wakhe uku-pastiche the Isitalato iCoronation abafazi. '
UBryn - Blackburn, eNgilani kunye noJames - Vancouver, Canada
Ii-singles zihlala zihlelwa ezantsi kwi-albhamu, kwaye oku bekuchasene, njengoko kuguqulelwe Imisebenzi imalunga nemizuzwana engama-30 emifutshane- enye inesingeniso eside sokudibanisa kunye nesisodwa solo.
ULisa Stansfield ucule le konsathi ka-1992 yeFreddie Mercury Tribute Concert. Weza kwinqanaba laseWembley Stadium enxibe iinwele ezijijayo kwaye efaka isicoci sokucoca irhafu kwividiyo yengoma.
IBertrand -Paris, eFrance, ngaphezulu kwe-2
Ngokudabukisayo, ividiyo ye-paston yaseCoronation ayizange ihambe kakuhle, kwaye yayivinjelwe kwi-MTV, oku kuthetha ukuba omnye wasweleka eMelika. UFred Mandel, owayedlala ii-synths kunye notyikityo solo kwingoma, uchaze kwi Imihla yoBomi bethu Uxwebhu: 'Luhlobo oluhlekisayo lwaseBritane, kwaye andicingi ukuba luhambe kakuhle eMelika. NdingumCanada, ngenxa yoko ndiyifumene! '
URoger Taylor wabonakala ecaphukile: 'Ngezo ntsuku kwiMTV, yayinguWhitesnake, kunye no-King Whitesnake, kunye nomnye umkhondo weWhitesnake! Inokuba babecinga ukuba amadoda anxiba ngokutsala ayengekho 'iliwa' ngokwaneleyo, ndicinga njalo. ' UBrian May wongeze, 'Ndicinga ukuba ngelo xesha saphulukana neMelika, okulihlazo, kuba oko kuthetha ukuba kukho iingoma zeKumkanikazi ezingazange zidlalwe okanye ziviwe apho.'
Uninzi lucinga ukuba isongo sidlalwa kwikatala. Ngokwenyani ayisiyiyo - yingoma yentsimbi eyenziwe ngumenzi webhodibhodi enetalente uFred Mandel. 'UJohn akazange afune isiginci solo' amanqaku kaRoger Taylor. 'Ke ufumene uFred, ongumdlali webhodi yezitshixo oqaqambe kakhulu, ukuze aqulunqe into ejikeleze eyona ngoma imnandi, kwaye noFred uyenzile le nto.'
UBrian May ebonakala ngathi akavumelani nayo ekuqaleni: 'Khange ndivumelane nayo ngelo xesha, kodwa ndiyinike intsikelelo yam ... UMandel ngokwakhe waqhula malunga nendlela eyayingqubana ngayo nomgaqo-nkqubo wangaphambi kokumodareyitha weQueen kwiirekhodi zabo zakuqala ze-1970s: 'Zonke iirekhodi ezindala zazisoloko zisithi' akukho zenzi zenzi ...
UFreddie Mercury wayekulungele ukucheba uphawu lwentengiso yakhe ngethuba lakhe lokuba ngumfazi kwividiyo, kodwa umlawuli uDavid Mallet wayimisa. Uxelele uthotho lwamaxwebhu Ividiyo yabulala iRadio Star Ndathi, 'Hayi, inye into ongayenzanga, into ehlekisayo kukuba amadevu akho akhona kwaye urhuqa!' Kuze kube namhlanje, xa efika ngekona kunye ne-hoover ndihleka. ' Imercury uyenzile umjelo 'wokubanjwa kwenxalenye kamva kwividiyo, apho ajikelezwe yiRoyal Ballet ngokunqwala kwi-ballet yaseFrance Emva kwemini ye faun kunye neenkwenkwezi zayo ezicocekileyo zaseRussia uVaslav Nijinsky.
UMallet, owalathise ezinye iividiyo ze-Queen ezifana ' ibohemian rhapsody kunye ' KwiRadio Ga Ga , 'watsho okona konwaba ngale kliphu.
Ezi ngoma zivakalayo a Intengiso yeDoritos 3D eyasasazwa ngexesha leSuper Bowl ngo-2021. Kwintengiso, uMateyu McConaughey unamacala amabini ade atyibilike kumatshini wokuthengisa aze atye ukutya okulula.
Indoda ifana nengoma yenenekazi
umele ntoni u-333
ukuvumela iintsuku zihambe ngamazwi
enkosi ngeenkumbulo kuwa inkwenkwe
uyakundikhumbula xa kuvuthuza umoya wasentshona
ukwanga ukusuka kumhla wokukhutshwa kwe rose